Ny toe-tsaina no manapaka ny zava-drehetra, ny antsipiriany no mamaritra ny fahombiazana
Ouzhan (Shanghai) Co., Ltd. dia orinasa iray mampiditra indostria sy varotra. Ny orinasa dia miorina ao amin'ny Building 38, Jinguo Industrial Park, No. 500, Zhenkang Road, Jinshan District, Shanghai. Ny orinasa dia mandrakotra velaran-tany 1200 metatra toradroa ary manana mpandraharaha 30, injeniera 10 ary inspektera kalitao 5. Ny fitaovana famokarana avo lenta sy famokarana avo lenta mihoatra ny 30. Ny mpiara-miombon'antoka amin'i Trutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco sns.
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanodinana namboarina amin'ny karazana milina sy fitaovana. Ny teknolojia fanodinantsika dia misy ny fikosoham-bary CNC, ny fihodinan'ny CNC, ny fitotoan'ny tany anatiny ary ivelany, ny fanapahana ny laser ary ny fanenomana vy Fametahana CNC, fametahana milina familiana, fametahana cnc 4/5 axis, fametahana sy famonoana maty sns.
Ny vokatray dia ampiasaina amin'ny sehatra samihafa, toy ny milina lamba, famokarana herinaratra, fitaovana laboratoara, fitaovana fitsaboana, jiro ara-barotra, aerospace sns.
Ny fitaovana famokarana fototra dia nohafarana avy any Suisse sy Japon.
Manana injeniera 10 ao amin'ny ivon'ny R&D izahay, dokotera na profesora avy ao amin'ny University of Science and Technology of China avokoa izy rehetra.
Manana mpiasa sy fitaovana fanaraha-maso kalitao matihanina izahay, araka ny fenitra iraisam-pirenena momba ny vokatra hozahanay, ary mamoaka tatitra momba ny fitsapana amin'ny antsipiriany.
Misy habe sy endriny namboarina. Tongasoa eto amintsika hizara ny sary 2D na 3D anao, andao hiara-hiasa mba hamorona kokoa ny fiainana.
Amin'izao fotoana izao dia manana fitaovana maoderina maoderina maherin'ny 30 ho an'ny milina sy fanandramana izahay, ny ankamaroan'izy ireo dia hafarana avy any Soisa sy Japon.
Ouzhan dia manana andalana famokarana valo ary afaka mamoaka vokatra 3000 vita ao anatin'ny iray andro.
Manana ny maso ivoho lozisialy iraisam-pirenena any an-toerana izahay, ary mamita ara-potoana foana ny famokarana, izay azo alefa amin'ny seranan-tsambo na seranam-piaramanidina amin'ny andro iray ihany.
Hotsapaina intelo ny vokatray alohan'ny fandefasana azy: det Detector mandeha ho azy; ② Hitan'ny maso; Test Fitsapana santionany. Farany, avoahy ny tatitra momba ny fitsapana.
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2005 ary efa namokatra kojakoja vita amin'ny milina nandritra ny 15 taona. Hatramin'ny nanombohany, aorian'ny nahazoantsika sary 3D na CAD an'ny mpanjifa, dia handinika azy ireo ny injenieranay. Amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny takian'ny mpanjifa, matetika isika dia afaka manome sosokevitra matihanina hamonjy ny vidin'ny mpanjifa na hamita tsara kokoa ny famokarana.
R & D FAHASOA
Saingy ho an'ireo mpanjifa tsy manana sary dia afaka manampy anao ny mpiampita anay.
1. Raha manana vokatra ivelan'ny talantalana tianao hamokaranao ianao, saingy tsy manana sary 3D, mila mandefa ny vokatrao fotsiny ianao, azonay atao ny mametraka ny sariny avy eo dia manomboka mamokatra.
2. Raha tsy manana ny vokatra na ny sary ianao dia tsy maninona. Zarao aminay fotsiny ny hevitrao. Ireo injenieranay dia hamolavola ireo sary araka ny zavatra takinao ary handefa azy ireo ho anao hanamafisana aorian'ny fitsapana.
Ouzhan izao dia manana mpiasa maherin'ny 30 ary mihoatra ny 10% no manana mari-pahaizana Masters na Doctor. Ireo injenierantsika folo dia nahazo diplaoma avy amin'ny anjerimanontolo sinoa ambony indrindra miadidy ny milina ary manana fahalalana matihanina manan-karena. Ny mpiasa ara-barotra avy any ivelany dia diplaoma matihanina amin'ny varotra iraisam-pirenena, mahay amin'ny fizotry ny varotra ivelany. Ireo sampan-draharaha roa ao amin'ny orinasanay dia afaka mifanampy ary mitondra ny serivisy tsara indrindra ho anao.
Ny kolontsain'ny orinasa iray dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny Impact, Infiltration ary Integration. Ny fampandrosoana ny Ouzhan dia notohanan'ny soatoaviny lehibe tao anatin'izay taona lasa ------- Fahamarinana, Fanavaozana, andraikitra, fiaraha-miasa.
Ouzhan manaraka ny fitsipika foana, mifototra amin'ny olona, ​​fitantanana tsy fivadihana, kalitao faran'izay avo lenta, laza malaza dia nanjary Fahamarinana ny loharanon'ny tena loharanon'ny fifaninanana ao Ouzhan.
Ny fanavaozana no votoatin'ny kolotsaina Ouzhan.
Ny fanavaozana dia mitarika amin'ny fampandrosoana, izay mitarika fitomboan'ny tanjaka.
Ouzhan dia manana fahatsapana andraikitra lehibe sy iraka ho an'ny mpanjifa sy ny fiaraha-monina.
Io foana no hery manosika ho amin'ny fampandrosoana an'i OuZhan.
Amin'ny fanatanterahana mahomby ny fiaraha-miasa amin'ny fahamendrehana
Ouzhan dia nahavita nahatratra ny fampidirana loharanon-karena, ny fifamenoana, toy ny sampan-draharaha teknolojia sy ny departemantan'ny varotra misy antsika, avelao ny olona matihanina hanome lalao feno ny mana-pahaizana manokana.
1. Serivisy ho an'ny milina namboarina
2. Famokarana faobe
3. Famolavolana vokatra
4. fanaovana santionany
5. Fanohanana ara-teknika
6. Fitsapana vokatra
7. Serivisy lojika sy fanondranana
8. Serivisy aorian'ny fivarotana